Maaksi Pilaanki - Wikipedia
Maaksi Pilaanki (Ebla 23, 1858 – Onkoloolessa 4, 1947) fiizisistii tiyoorii lammii Jarmanii yoo ta'u kan inni ittiin beekkamus tiyoorii quwaantamii bu'uuressudhaani, kunaafis Badhaasa Noobelii kan Fiiziksii kan bara 1918 argateera.
Pilaanki tiyoorotikaal fiiziksiidhaa gumaacha guddaa godhe, garuu beekkamtiin isaa inni guddaan tiyoorii quwaantamii nama uume ta'uu isaatini. Haa ta'u malee, maqaansaa damee barnootaa ballaa keessatti beekkama, bara 1948 maqaan inistiitiyuutii saayinsii Jarmanii kan Hawaasa Kaayizer Viilheelmi jedhamu (Pilaanki si'a lama pirezidantii ta'ee kan bulche) gara Hawaasa Maaksi Pilaanki (HMP) jijjiirame. Dhaabbanni kun amma damee irratti xiyyeeffannoon baratamu 83 qaba.
Tiyooriin quwaantamii Maaksi Pilaanki, hubannoo ilmi namaa atomii fi adeemsa sab-atomii baruu irratti jijjiirrama guddaa fide, akkuma tiyoorin Alberti Anistaayin hubannoo iddoo fi yeroo (space and time) jijjiiretti. Kun lamaan walitti tiyoorii bu'uuraa fiiziksii jaarraa 20ffaa ti.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Maaksi_Pilaanki&oldid=33018" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 18 Haggaya 2020, sa'aa 19:39 irratti.